'नेपालमा नयाँ प्रजातिको काेराेना संक्रमण भुसको आगोजस्तो सल्किरहेकाे छ' - Sunaulo Nepal
'नेपालमा नयाँ प्रजातिको काेराेना संक्रमण भुसको...
'नेपालमा नयाँ प्रजातिको काेराेना संक्रमण भुसको आगोजस्तो सल्किरहेकाे छ'
डा. अनूप बाँस्ताेला
चैत्र २८, २०७७ शनिवार ०६:५९ बजे
नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्राे अध्याय शुरु भइसकेको छ । बिगत १० दिन यता सिकिस्त संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ । सिकिस्त संक्रमितमध्ये पनि यो महिना ५० वर्ष मुनिका बिरामी ५०% कै हाराहारीमा छन् । जुन अघिल्लो ३ महिनाको तुलनामा संख्यात्मक हिसाबले दोब्बर जत्तिकै हो ।
अहिले पत्ता लागेका संक्रमितमध्ये सिकिस्त संक्रमितको संख्या धेरै छ । यसको अर्थ, समुदायमा पत्ता लागेका भन्दा धेरै व्यक्ति संक्रमित भइरहेका छन् भन्ने हुन्छ । यी संकेतहरुले समुदायमा कोरोना भाइरसको दोस्रो छाल व्यवस्थित भइसकेको पुष्टि गर्छ ।
टेकु अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना हुने बिरामीको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । पछिल्ला केही हप्ता संक्रमितको मृत्यु भएको छैन, तर अहिलेको सिकिस्त बिरामीको चाप यही गतिमा बढ्ने हो भने २-३ हप्ताभित्र मृत्युदर बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
पछिल्ला दिनमा प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणमा 'एस जिन टार्गेट फेलियर' (एस जिन नेगेटिभ) को संख्या बढी देखिएको छ । यसले कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति (यूके भेरियेन्ट) समुदायमा फैलिरहेको छ भन्ने विश्वसनीय आधार दिन्छ ।
कोरोना भाइरसको पहिलो छालमा जेष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी जोखिममा थिए भने दोस्रो छालमा युवा पुस्ता मात्र होइन बालबालिकासमेत जोखिममा देखिएका छन् । त्यसैले सानोभन्दा सानो पनि लापरबाही नगरौं । लक्षण देखिनासाथ परीक्षण गरौं । धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गरौँ ।
हामी कोरोना भाइरसको पहिलो चपेटाबाट बाहिर निस्कनै लाग्दा दोस्रो छालको सँघारमा आइपुगेका छौँ । जनघनत्व बढी भएका स्थानमा दोस्रो छाल टार्नै नसक्ने गरी फैलिनसक्ने खतराको घण्टी बजिसकेको छ । हामीले सुरक्षा मापदण्डको पालनामा हेलचेक्र्याइँ फिटिक्कै गर्नु हुँदैन ।
कोरोना भाइरसको दोस्रो छाल सम्भावित जोखिमसहित फैलियो भने, हामी अर्को भुमरीमा पर्ने निश्चित छ । हामीले अझै व्यवस्थित र योजनाबद्ध तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, भीडभाड रोकौँ । बच्चाहरुलाई घरमै सुरक्षित राखौँ, मापदण्ड पूर्ण पालना गरौँ । आफू बचौँ, अरुलाई पनि बचाऔँ ।
–संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. बास्तोलाकाे फेसबुकबाट ।
# कोराेना भाइरस
राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको ३१ औं स्थापना दिवसलाई फर्केर हेर्दा
पहिलाेपटक अमेरिका जाँदा...
ओलीको संकटमोचक बन्दा शीतल निवासमा बालुवाटारको छायाँ